OPDON shiran dhalattee, Jiraattee shiran duu’dhaf tatafachaa jirtti! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDON shiran dhalattee, Jiraattee shiran duu’dhaf tatafachaa jirtti!
#HORROO -GUDURUUTTI SHIRA QOPHAAYE
Waxabajjii 22/2019 Magaalaa Shaambuu keessatti qaamni mootummaa biqiltuu dhaabuu qamna akka godina keenyaatti jechuun sagalee guddistuun magaalaa keessa beeksisaa jirama.
Dhuguma biqiltuu dhaabuuf yoo tahe waan jajjabeessamuu qabuu Fi namuu bahee dhaabuu qabudha.
Garuu waanti gola opdo godinicha keessaa bahaa jiru icciitii dhoksaan akkas jedha.
Innis guyyaa boruu Waxabajjii 22/2019 yeroo ummatni biqiltuu dhaabuuf bahu akka ummatni baheen biqiltuu dhaabuu dhiisisnee hiriira akka bahan goosifna jechuun taphachaa jirtu.
Uummata biqiltuu dhaabaa jettanii baastanii Erga ummatni bahee immoo biqiltuu dhaabuu osoon taane ABO balaaleffannaa akka gaggeessu dirqisiifna jechuun akka murteessitanii jirtan Qeerroon sammuu qaraa icciitii keessan bira gahee jira.
Namootni dhimma kana irratti shira xaxaa jirtanis maqaa keessan guutuu qeerroon harka galfatee jira.
Ummata misoomaaf bobbaasuun gaariidha nuyillee ni deeggarra jedhu Qeerroon magaalaa Shaambuu garuu shira biqiltuu dhaabuu sababa gochuun Ummata goyyoomsitanii gara hiriiraatti oofuun balaaf isin saaxila.
Ummatni keenya magaalaa Shaambuu Fi naannoo ishee shira guyyaa boruu opdon isin irratti dalaguuf deemtu kana bartanii akka irraa of qusattan waamicha keenya isiniif dabarsina jedha Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaalaa Shaambuu fi naannoo ishee.
Waamicha kana yeroo isiniif dhiyyeessinu biqiltuu dhaabuuf nuyillee isin cinaa dhaabbanna garuu hiriira bahamu irratti kan opdon qindeessaa jirtu dhadannoo qopheessite isin qabachiiftee baasuuf waan jirtuuf irraa of qusadhaa.
Namni waamicha kana tuffatee hiriira shiraa opdon magaalaa Shaambuu qopheessite kana irratti argameef itti gaafatamummaa isaa ofuma keessan fudhachuuf akka qophooftan beekkadhaa .
Kaadireen opdo fi waraanni isin abdattanii bahuuf jettan yoo jiraate boru isin bira hin jiran kanaaf kan isinitti hafu Qeerroo waan taheef waamicha keenya akka kabajjan kabajaan isin gaafanna.
QEERROO BILISUMMAA MAGAALAA SHAAMBUURRAA.